Reninà Miaramila Mamorona Fampiasa Mba Hiarovana Ny Zon’ireo Zazavao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2016 2:48 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, বাংলা, Ελληνικά, čeština , Español, English
Zazavaon'ny tafika Rosiana. Sary natolotry ny mil.ru.
Namorona fampiasa iray vaovao amin'ny finday ho an'ireo Rosiana zazavao ireo mpikatroka mpiaro zon'olombelona , fampiasa izay manome torohay mahasoa momba ireo olana maika indrindra manjo ireo zazavao ao anivon'ny tafika, ary ahafahan'izy ireo miaro samirery ny zony.
Ny Draftee Online (Zazavao ety anaty aterineto) dia noforonin'ny Renin'ireo Miaramila ao Saint Petersburg, fikambanana tsy mitady tombony ara-bola natsangan'ny renin'ireo tanora zazavao ao anatin'ny tafika Rosiana mba hanoherana ny fanararaotana sy ny fanitsakitsahana ny zo izay zary efa fomba mahazatra ny fiatrehan'ireo zazavao nantsoina ho ao amin'ny tafika.
Ilay fampiasa dia ahafahan'ny zazavao rehetra, tafiditra amin'izany ireo izay mihevitra ny hanao raharaha miaramila na ireo hangataka famotsorana, mba ho afaka hahazo haingana torohevitra araka ny lalàna sy ireo ohatra maro mahazatra momba ny fanitsakitsahana ny zon'ireo zazavao. Raha misy fanitsakitsahana mitranga, azon'ireo mpampiasa atao ny mahita drafitra momba izay fanambaràna ilainy atao sy ny fitarainana ary torohay momba izay ifandraisana amin'ireo tomponandraikitra isan'ambaratonga mahefa, hatramin'ny laharana ahafahana miantso maika momba ny zon'olombelona. Azon'ireo zazavao atao ihany koa ny mampiasa ilay fampiasa mba hifandraisana amin'ireo fikambanana mpisolovava amin'ny alàlan'ny endri-pifandraisana manokana natokana ho amin'izany.
Zavara iray misongadina amn'ilay fampiasa “Draftee Online” ny fisian'ilay “bokotry ny vonjy taitra”—zavatra iray manokana izay ahafahan'ireo mpampiasa azy mandefa hafatra maika mangingina ho an'ny fianakaviany raha toa izay ka notànana tsy ara-dalàna sy noterena hanjary zazavao ao anatin'ny tafika.
Afaka alaina ao amin'ny Google Play ankehitriny ilay fampiasa ho an'ny Android.
Tamin'ny 1991 ny fikambanan'ny Renin'ireo Miaramila ao Saint Petersburg no noforonina mba hanairana ny saina momba ireo fanitsakitsahana zon'olombelona ao anivon'ny tafika sy hanomezana torohevitra araka ny lalàna ho an'ireo zazavao Rosiana ary ny fianakaviany. Ny Aogositra 2014, nohosorana ho “olon”ny vahiny” ilay fikambanana, araka ilay lalàna tamin'ny 2012 izay mitaky amin'ireo fikambanana Rosiana tsy mikatsaka tombontsoa mba hanaiky ilay fomba fiantso raha toa izy ireo mandray vola fanampiana avy any ivelany ary manao hetsika poltika amin'ny fomba tsy mivantana. Nohamafisin'ilay fikambanana fa efa am-bolana maro talohan'ny nivoahan'ny fampiharana io fomba fiantso io no nitsahatra tsy nandray fanampiana avy any ivelany izy. Ny Oktobra 2015, nesorin'ny Ministeran'ny Fitsarana ao Rosia tsy ho ao anatin'ny lisitr'ireo “olon'ny vahiny” ny fikambanan'ny Renin'ireo Miaramila ao Saint Petersburg.